भोलिबाट शुरु हुँदै सोह्र श्राद्ध: कुन तिथि कतिखेर गर्ने पिण्डदान ? यस्तो छ १६ वटै तिथिको समय ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/भोलिबाट शुरु हुँदै सोह्र श्राद्ध: कुन तिथि कतिखेर गर्ने पिण्डदान ? यस्तो छ १६ वटै तिथिको समय !
काठमाडौँ – प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण पक्षमा दिवंगत पितृका नाममा गरिने सोह्र श्राद्धका लागि आवश्यक पर्ने अपराह्नकालको समय निर्धारण गरिएको छ ।धर्मशास्त्रका विभिन्न ग्रन्थमा सोह्र श्राद्ध अपराह्नकालमा गर्नु भन्ने वचनअनुसार पञ्चाङ्गकार एवं तोयनाथ पन्तको पात्रोका सम्पादक सूर्यनाथ पन्तले १६ वटै तिथिको समय निकाल्नुभएको छ । पितृ पक्षसमेत भनिने सोह्र श्राद्ध यस वर्ष भदौ १७ गते बुधबारदेखि शुरु हुँदैछ ।